Guide dhamaystiran Imtixaanka fahamka Reading ah
Review DAT Koorsooyinka
Tilmaamaha DAT Guud
Guudmarka The Test Admission Ilkaha
Xeeladaha Exam IT
DAT Review Qalabka
Imtixaanka fahamka Reading waa mid ka mid ah afar imtixaanada Baaritaanka Admission Ilkaha. Baaritaankaan waxaa dhaliyay in lala soo Survey of Sciences Dabiiciga ah iyo Test Sabab u tiro ahaaneed si loo qorsheeyo score Celceliska Academic aad.
score A sare ee Imtixaanka fahamka Reading waa hab fudud si ay u kordhiyaan gool Celceliska Academic iyo caawin xafidi kasta dhibcaha hoose in baaritaano kale ama hoosaadyo uu ka samaysan yahay Celceliska Waxbarashada. Si kastaba ha ahaatee, marka dugsiyada ilkaha eegto dhibcaha imtixaanka iyo subtest qofka score Test Reading fahamka aha kuwo xambaari waxa miisaanka sida ugu badan ee Survey of dhibcaha subtest Sciences Dabiiciga ah ama Imtixaanka Awoodda garasho.
dugsiyada ilkaha qaarkood waxay jecel yihiin in ay arkaan ardayda si wanaagsan dhalin imtixaanka la caadiga ah score ah oo ugu yaraan ah 19 ama ka sareeya. Waa qaybta ugu fudud inay shabaqa si fiican on in my opinion oo waxaan aaminsanahay in qof walba goolal ka dhalin karin 20 ama wax ka sareeya imtixaanka this.
No aqoon horey mawduucyada lagaga hadlay faqradihiisa on imtixaanka loo baahan yahay. Baaritaankaan waxaa hoos u imanayaa inuu awoodda aad u jiid warbixin ka article ah ee hab wakhti oo lagu fulin karaa iyada oo loo marayo xeelado qaadashada imtixaanka wax ku ool ah iyo maamulka waqti ku habboon. Raadi iyo hirgelinta hannaanka qaadashada wax ku ool ah imtixaanka kuu shaqeeya iyo waqti qaadata imtixaanada dhaqanka.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah tilmaamaha guud ee kaa caawin doona inaad noqon wacay wax ku ool ah oo imtixaanka:
Tirtiridda: Eeg jawaabaha suuragal ah in su'aal kasta oo la helo kuwa aad isla markiiba la baabi'iyo karaa. Baabi'inta jawaabo kaa caawin doona inaad takhaluso distractors iyo si dhakhso ah soo jawaab sax ah. Tani waa wax waxtar leh in la sameeyo iyadoo su'aal kasta oo ku saabsan DAT ah; waxaa jira distractors on su'aal kasta. Sida caadiga ah had iyo jeer waxaad yeelan doontaa laba fursadaha jawaabta su'aasha kasta oo aad leedahay si aad go'aan u dhexeeya iyo inta kale ee doorashooyinka jawaabta waa inaad awooddaa in la baabi'iyo.
Maaraynta Waqtiga: Hubi in aad dhamaystirka marinka kasta oo su'aalaha ku jira hab wakhti. Waxaa jira 3 reading marinnada la 50 su'aalo guud ee imtixaanka. Waxaad leedahay 72 seconds in ay ka jawaabaan question.This kasta waa mid ka mid ah baadhitaano dheeraad ah ay adag tahay si ay u maareeyaan waqtiga aad ku, Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in aad iskaaga u waqtiga iyo ku dhaqmaan maaraynta waqtiga aad si caqli ah halka barbarta baaritaankaan. A istaraatijiyad wanaagsan oo wax ku ool qaadashada imtixaanka si weyn kaa caawin doontaa in this dhammayn.
Practice: Ma baaritaano badan oo dhab ah iyadoo ay aad karto ee Imtixaanka fahamka Reading ah; ayaa in ka badan si fiican u! Waxaad u baahan tahay inay qaataan imtixaanada dhaqanka kala duwan si aad u hesho iyo hirgelinta hannaanka qaadashada wax ku ool ah imtixaanka kuu shaqeeya. Sidoo kale in ay raaxo dheeraad ah oo hufan oo aad istaraatijiyad taas oo kordhinaysa xawaaraha wax akhriska iyo si sax ah ka jawaabidda su'aalaha ku. Tani waa jidka keliya ee wuu burburin.
Speed ​​Reading Course: Haddii reading ma aha mid ka mid ah awoodaha aad markaas xawaare Dabcan reading noqon kartaa faa'iido inaad. Waxay horumarin kartaa xawaaraha wax akhriska iyo caawin in aad si dhakhso ah oo waxtar leh soo bixi macluumaadka loo baahan yahay in ay ka jawaabaan su'aalaha. Waad u arki kartaa kooras online lacag la'aan ah ama lacag, waayo, mid. Read Speeder waxay bixisaa koorso cajiib online free ah.
Imtixaanka fahamka Reading waxay leedahay 50 su'aalo guud iyo wuxuu ka kooban yahay 3 marinnada la qadar kala duwan oo su'aalo ah halkii maris. maris kasta oo caadi ahaan waa 1-2 pages oo dherer leh agagaarka 15 su'aalo per maris.
marinnada wuxuu noqon doonaa oo ku saabsan mawduucyada kala duwan ee sayniska. Ma jirto baahi waxgarashada ka hor mowduucyo kuwaas oo si ay ka jawaab su'aalaha. Baaritaanku wuxuu u baahan yahay oo kaliya awood u leh in uu akhriyo, fahmid, oo si fiican u falanqeeyaan macluumaad sayniska aasaasiga ah.
Liiska soo socda xeelado yihiin xeelado badan in aan ka bartay oo lahaa waayo-aragnimo iyaga oo isticmaalaya. Waxaa laga yaabaa in xeelado kale oo aan hoos ku qoran, laakiin mid ka mid ah xeeladaha kuwaas oo la fulin karo imtixaanka this.
Read marinka: Qorshahani waxa uu u fudud ku lug leedahay reading marinka ee guud ahaanteed hor eegaya su'aalaha. Dadka qaar ayaa laga yaabaa in ay dareemaan raaxo badan jawaabista su'aalaha mar ay leeyihiin faham cad oo ku saabsan tuducdan si ay u door bidaan habkan.
Waxaan kula talin lahaa waxa ka dhanka ah, sababtoo ah waa habka län inay imtixaanka this iyo maareynta waqtiga saboolka ah ee aan opinion waa pitfall weyn baaritaankaan. Waxa kale oo ay adag tahay in la hayn macluumaad badan oo muddo gaaban si ay uga jawaabto su'aalaha ku.
Waxaad waqti dheeraad ah la habkan ku qaataan reading marinka doonaa ka badan wax kasta oo kale, maxaa yeelay, waxaad kor u dhammaan doonto inay dib ugu noqdaan marinka waayo, su'aal kasta oo dib u akhri wax ka si ay u jawaabi su'aal kasta. Waxaad dhammaan doontaa akhriyey marar badan wax la mid ah oo ay isticmaalaan ilaa aad siisid waqti badan loo qoondeeyay.
Read Su'aalaha ku: Qorshahani waxa uu u fudud ku lug leedahay reading su'aalaha ugu horeysay ka hor inta reading iyada oo marinka. Dadka qaar ayaa laga yaabaa in ay dareemaan raaxo badan by ogayn wixii su'aalo ah waxaa lagu weydiinaya ka hor ay bilaabaan akhriska qalab si ay u door bidaan habkan.
Waxaan kula talin lahaa waxa ka dhanka ah, maxaa yeelay waxa ay sidoo kale waa hab gaabis ah in ay qaataan imtixaanka this. Way adag tahay in la xasuusto dhamaan su'aalaha marka aad bilaabayso akhriska iyada oo loo marayo wax ka si ay u raadiyaan jawaabaha.
waqti dheeraad ah, waxaad ku Bixisaan doona inay dib u tag oo u eegno su'aalaha marar badan inta aad reading tahay ilaa aad la timaado jawaabta su'aasha ah. Waxaad dhammaan doontaa marar badan dib-u-akhrinta su'aalaha oo ay isticmaalaan ilaa aad siisid waqti badan loo qoondeeyay.
Dufanka laga waayo, Erayada furaha: Tani waa istiraatiijiyad ugu caansan imtixaanka oo ku lug reading su'aal ka dibna skimming marinka for keyword ah(s) ka su'aasha.
Tusaale ahaan, haddii aad maris ah on pasteurization oo su'aal la weydiiyay oo ku saabsan pasteurization caano markaas aad dufanka laga lahaa marinka ilaa aad ka yimid ee guud ahaan caano iyo akhriyey cutubka in ilaa aad ka helay jawaabtaada.
Caadi ahaan xukun ugu horeysay ee cutubka kasta waxay bixisaa mawduuca for Baaragaraafka in. Ka dib markii skimming marinka marar badan sida aad maraan su'aalaha aad caadi ahaan wax fikrad fiican oo waxa laga wada hadlay in cutubka kasta oo sidaas daraaddeed jawaabi karo inta ka dhiman su'aalaha fudud.
Waxaad dhammaan doontaa maraya marinka jeer ka badan, laakiin habkan waa ka dhakhso badan kuwa kale, maxaa yeelay, idinku ma reading jeer marinka badan aad u skimming. Isku day baxay naftaada iyo u aragto haddii ay kaa caawinaysaa in aad qaado tirooyinka aad on imtixaanka this.
Waxaan kaliya ka digaya in aad si aad u hubiso oo akhri weedhaha ku wareegsan keyword ah(s) in aad ka heli jawaab sida mararka qaarkood aad laga yaabaa in qiyaanay ama iska eafiya iskana wax aan akhriska ku filan fahamka.
Roadmap marinka: Tani waa istiraatiijiyad kale oo caan ah oo baaritaankaan iyo waa jidkii aan door bidaan. Waxay ku lug leedahay samaynta roadmap ka mid ah tuducdan ee guud ahaanteed ka hor inta uusan u dhaqaaqin su'aalaha. First, tirin sida badan cutubyada waxaa jira in maris iyo aad sheet dahaaray in lagu siiyo lambarka xarunta imtixaanka faqradihiisa khaanadda a on dhinaca bidix. Markaas dufanka cutubka kasta oo qor keywords, mawduucyada, magacyada, taariikhaha, iwm waayo cutubka kasta oo ka yar qiimaha tirsi loo xilsaaray. Markaas ka furray in ay su'aalaha iyo tixraac dib si aad u roadmap su'aal kasta in la ogaado waxa Baaragaraafka ku jiri doona jawaabta.
Waxaan sii wadi doonaa tusaalihii pasteurization laakiin isticmaasho farsamada roadmapping hadda, halkan waxaa ku qoran tusaale ah :
Waxaa jira 9 cutubyada in tuducdan sidaas darteed waxaan ka dhigi column ka 1-9 hoos dhinaca bidix ee warqada note our.
1. Pasteurization, qeexid
2. Louis Pasteur, farmashiyaha, biolojiste
3. Nicolas Appert, maraqa, khudaar, Casiir, saxmadda
5. bakteeriyada, Salmonella, listeria, Staph. aureus, E. coli
6. cudurada, qaaxada, brucellosis, diphtheria, qandho casaan
7. Hab-, noocyada
8. High-kulka, -Waqtiga gaaban; flash
9. nolosha shelf la dheereeyey
Haddii aad qabto wax su'aal ah oo ku saabsan cudurrada pasteurization hortagi karaa markaas aad eegto aad roadmap iyo ogahay Baaragaraafka in 6 wadahadalo ku saabsan cudurrada. Haddii aad qabto su'aal ku saabsan pasteurization flash markaas aad eegto aad roadmap iyo ogahay Baaragaraafka in 8 wadahadalo ku saabsan pasteurization flash.
Qorshahani waxa laga yaabaa in aanay sida ugu dhakhsaha badan skim ee farsamo keywords, laakiin waa in hoos u qadarka wakhti in aad sameysid akhris sida aad roadmap kaa caawin doona inaad la helo halka macluumaadka aad u baahan tahay si aad u hesho waa at ee marinka. Waa istaraatijiyad habaysan oo u dhisan oo wax OCD dadka aniga oo kale maqsuud doonaa. Waxaa ka dhigi doonaa in aad wax ku ool ah ee deg deg ah jiidaya soo baxay jawaabaha Cabaariim ka iyo maaraynta waqtiga aad ka sii guul.
istiraatiijiyad wax ku ool ah ka dhigi kartaa faraqa oo dhan iyo in aad dhalin 20 ama ka sareeya Imtixaanka fahamka Reading ah. Waxaa oo dhan hoos yimaado waxa istaraatijiyad kuu shaqeeya. Isku day inaad soo baxay wax yar oo ka mid ah, ama aan ka helo mid ka mid kale oo aan kor ku qoran oo bal arag waxa uu ku siinayaa natiijada ugu wanaagsan.
Waxaad leedahay 60 daqiiqo si ay u dhamaystiraan Imtixaanka fahamka Reading ah. Waxaa jira 3 marinnada iyo 50 su'aalo guud. Waxaad heli doontaa 72 seconds per su'aal on imtixaanka this, balse xusuusnow in haddii aad akhrinaysid meelihii ay ahaanteed ama wadada iyaga Khariidadeynta ka dibna this qaadan doonaa laga bilaabo wakhtiga aad iska heli karo in aad ka jawaabto su'aalaha.
Haddii aad doonaysid in aad ka akhrisan tuducdan ee guud ahaanteed ama waxa Roadmap-ka dibna waa in aad ku talo jirto wax ka badan faqri 3 daqiiqo maris. Tani waxay hoos u dhigi doontaa waqtiga aad ugu qaybiyey ka jawaabidda su'aalaha, laakiin weli agagaarka waxaad yeelan doontaa 60 seconds in ay ka jawaabaan su'aal kasta taas oo noqon waa ku filan.
Waxaa jira dhawr qalabka dib u eegis kala duwan oo aad u isticmaali kartaa si ay isugu diyaariyaan Imtixaanka fahamka Reading ah. Kulligood waxay aad ula siman yihiin DAT dhabta ah iyo waxaa loo arkaa dhammaan waxyaabaha wanaagsan in la isticmaalo. runtii Waxaad ma aan tegi karo qaldan mar haddii taasi Kaplan, Review Princeton The, ama Dabcan kale dib u eegis.
Waxaan jeclaan xaqiiqada ah in haddii aad iibsato qalabka Kaplan ayaa markaas waxaad marin u leedahay shan imtixaan dhererka buuxa meesha aad ku dhaqmaan kartaa Baaritaanka Reading fahamka iyo yaryar oo dheeraad ah oo imtixaanka qaybta halkaas oo aad ka heli karto dhaqanka xitaa ka sii badan. Kaplan ku siin doonaa badan oo tababar iyo waayo-aragnimo Imtixaanka fahamka Reading ah.
Review Princeton The ku siin doonaa afar imtixaan dhererka buuxa meesha aad sidoo kale su'aalo dhaqanka ku filan iyo imtixaanada. Waa in aad hesho tababar ku filan la dabcan dib u eegista iyo sidoo baaritaankaan.
Crack DAT ah ayaa software imtixaanka wanaagsan DAT ee ay ka mid yihiin Imtixaanka fahamka Reading ah. Waxay ku siin doonaan in ay 10 imtixaan baaritaankaan ku xidhan oo edition aad iibsato.
Waxaa jira ilo dheeraad ah waxaa si aad u hesho mid idin siin doonaa wixii aad u baahan tahay si ay u leeyihiin waayo-aragnimo ku filan oo ay ku dhaqmaan in ay diyaar u tahay inay burburin Imtixaanka fahamka Reading noqon. Haddii aad u baahan tahay caawimo laga helo Dabcan dib u eegis ka dibna si xor ah u ii fariin!